Xiaomi Mi 10 T Pro, na-egosi mmalite nke njedebe dị elu [Analysis] | Gam akporosis
Xiaomi Mi 10 T Pro, na-egosi mmalite nke njedebe dị elu [Analysis]
Ọnọdụ dị na ekwentị mkpanaka na-agbasawanye, ọ bụ ezie na anyị doro anya na e nwere ngalaba abụọ na-adịghị arụ ọrụ nke na-adịkarị n'etiti ọdịmma nke ndị ọrụ kachasị, ndị dị ala na ndị dị elu. N'etiti etiti dị n'etiti iji nye atụmatụ ọrụ aka dị mma na ọnụ ala dị ala, ọ bụkwa ebe ahụ Xiaomi na-enwu enwu.
Chọpụta anyị niile ikike nke ọhụrụ Xiaomi Mi 10 T Pro.
3 Ngosipụta na ahụmịhe nke multimedia
4 Nnwere onwe na igwefoto
5 Jiri ahụmahụ
Anyị na-amalite site na iwepụ nke Xiaomi Mi 10 T Pro a, nke site n'ụzọ, dị na ọnụahịa na-adọrọ mmasị n'okpuru 500 euro na Amazon ugbu a. N'oge a Xiaomi abanyela ọzọ na iko na-egbuke egbuke maka azụ, Eziokwu bụ na n'agbanyeghị ọtụtụ nzọ ụkwụ ọ na - eweta, anyị nwere mmasị ya nke ukwuu. N'akụkụ azụ a, gbagọrọ agbagọ n'akụkụ anọ ya, modulu igwefoto dị na elu aka ekpe pụtara, ikekwe otu n'ime ndị a kacha mara amara n'ahịa. Nke a nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị etinye mobile na tebụl na ihuenyo na-eche ihu.
Ngwaọrụ a bụ otu n'ime ihe kachasị ibu na nke kachasị njọ, anyị na-echeta na anyị nwere 165 * 76,4 * 9,3 millimeters na usoro nke akụkụ maka ihe na-erughị gram 218. Ihuenyo ya nke 6,67 nke anụ ọhịa ahụ apụtaghị na ọ buru ibu buru ibu, agbanyeghị, anyị nwere batrị batrị dị oke karịa karịa na ụdị ndị ọzọ. N'agbanyeghị ihe niile, ọ dị mma na aka, ọ na-adị ka ọ siri ike kamakwa ọ na-enye mmetụta nke iwulite n'ụzọ zuru oke. Na ihu ya iko 2,5D pụta ìhè freckle na elu aka ekpe ebe igwefoto dị onwe.
O yighị ka na ọkwa teknụzụ, anyị agaghị enwe ihe dị ukwuu na nke a Xiaomi Mi 10 T Pro na, dị ka anyị kwuru, chọrọ ịtọ ntọala nke "ọnụ ala" dị elu. Ọ bụ ya mere o ji ahọrọ Qualcomm nke ọma ama ama Snapdragon 865 nke na-abịa na modem 5G. Banyere RAM, ha anaghịkwa ese okwu, ha na-ahọrọ 8 GB nke LPDDR5X ebe nchekwa site na "kachasị" n'ahịa, dị ka ọ dị na nchekwa izugbe, ebe ha nzọ na 128 ma ọ bụ 256 GB na mkpokọta mana na teknụzụ UFS 3.1 kachasị ọsọ na ahịa.
Nka na ụzụ nkọwa Xiaomi Mi 10 T Pro
Nlereanya M 10 T Pro
Usoro njikwa Gam akporo + MIUI 12
Ihuenyo IPS LCD 6.67 sentimita asatọ FHD + na 144 Hz na 650 nits - HDR10 - Ogo 20: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 865
Nchekwa n'ime 128/256 UFS 3.1
Igwefoto na-aga n'ihu 108 MP f / 1.69 + Wide n'akuku 13 MP f / 2.4 + nnukwu 5MP f / 2.4 + ihere ihe mmetụta
Igwe n'ihu 20 MP f / 2.2
Njikọ Bluetooth 5.0 - 5G - WiFi 6 - NFC - IR
Batrị 5.000 mAh na Ọsọ ọsọ 33W
Dị ka anyị kwuru, njirimara ya na ikike ya yiri ka ọ ga-ahapụ ihe ọ bụla n'azụ, anyị nwere ncheta ngwa ngwa na nhazi nke solvency ghọtara.
Ngosipụta na ahụmịhe nke multimedia
Banyere panel ahụ, anyị na-amalite site na isi ụtọ izizi mbụ. Anyị nwere nnukwu nke 6,67 sentimita asatọ nke na-adịghị njọ ma ọlị, ma eziokwu nke inwe mkpisiaka agụ n'akụkụ ama dọrọ anyị aka ná ntị na anyị nwere IPS LCD panel. N'agbanyeghị nke a, anyị nwere mkpebi zuru oke FullHD +, ayeah dị ka ọnụ ọgụgụ ume nke 144 Hz mgbanwe nke na-enye anyị ahụmịhe pụrụ iche. Agbanyeghị, anyị nwere ntụpọ ebumpụta ụwa nke otu ụdị dị ka ụfọdụ onyunyo n'akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ igwefoto selfie, yana nchapụta n'èzí n'agbanyeghị agbanyeghị Nits 650, ọ dị ka ezughi oke nye anyị.
Ezigbo ọdịiche na nhọrọ nke agba
Ihe ntụpọ dị na IPS LCD
395 pikselụ kwa inch njupụta
Maka akụkụ ya, anyị nwere okwu okwu sterị abụọ, na-enweghị nkwenye Dolby Atmos. A na-anụ ha n'olu dara ụda ma doo anya iji nwee ọ enjoyụ na ọdịnaya ahụ n'agbanyeghị na ha na-efunahụ nkwalite bass na-arịwanye elu ma na-akọwapụta obere mkpọ mkpọ. Agbanyeghị, a na-enwe ekele na ha na-akụ nzọ na ụda stereo, ihe pere mpe na Xiaomi.
Nnwere onwe na igwefoto
Igwefoto bụ ngalaba mbụ ebe anyị ghọtara na anyị na-eche ihu na ngwaọrụ nke na-atụ aka ma gbaa na njedebe dị elu, na-enweghị njedebe nke njirimara ndị a na aka ya. Ọ na-apụta ìhè maka ntụgharị ya maka ihe mmetụta nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na nke anyị nyochara:
Isi 108 megapixels (1 / 1,33 sentimita, 1,6 μm pikselụ) na aperture f / 1.69 na a echiche nke 82º. Ọ nwere ngwa anya image stabilization maka oyiyi ndekọ. Ihe mmetụta a na-ata ahụhụ mgbe ụfọdụ na foto ọkụ azụ ma na-enye anyị ezigbo nsonaazụ ya. HDR na-abata n'ike n'ike n'agbanyeghị na m na-adụ ọrụ ịgbalite ya iji chekwaa igwe ọkụ.
Ultra Wide Angle 13 megapixel (pikselụ 1,12 μm) na oghere f / 2.4 na echiche nke 123º, na-enye ezigbo nsonaazụ zuru oke, nguzo ya na-acha ọcha na-adịgide adịgide, n'agbanyeghị nke a anyị enwetaghị nkọwapụta nke MP 13 MP na enweghị ọkụ ya ga-egosi ezi a otutu mkpọtụ.
Macro 5MP na oghere f / 2.4
selfie nke 20MP na oghere f / 2.2 nke na-enye nsonaazụ dị iche, yana oke oke ọhụụ nke mma mma ọbụna na obere usoro ya.
Banyere vidio vidio, anyị na-enweta ezigbo nkwụsi ike na igwefoto bụ isi, anyị na-echefu banyere nkwụsi ike ma laghachi na oge gara aga na ihe mmetụta ndị ọzọ. Anyị nwere ezigbo ihe ọ rụpụtara na Akpaka n'abalị mode Site na oghere bụ isi, anyị họọrọ nnukwu mkpọtụ mgbe anyị na-ekwu maka igwefoto ndị ọzọ, n'eziokwu, ọbụlagodi selfie na-enweta nsonaazụ dị mma na ọkụ dị ala karịa nke Ultra Wide Angle lens.
Banyere obodo, echere ya na batrị 5.000 mAh buru ibu. Ọ na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ 144 Hz nke ihuenyo ahụ n'ụzọ zuru oke, anyị ga-enweta n'etiti awa 7 na 8 nke ihuenyo dabere na ụdị ojiji anyị na-enye ọnụ ya, opekata mpe nke a gosipụtara na ule anyị. Nnwere onwe na-erite uru ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị esi na 144 Hz ruo 90 Hz ume ọhụrụ, ihe dabara n'ime mgbagha.
Charginggba ụgwọ ngwa ngwa na-enye anyị ohere nke iru karịa 60% ndụ batrị n'ime ọkara ọkara elekere site na 30W USB-C chaja esoro na ngwugwu. Ibu Ibu zuru ezu anyị ga-achọ ihe karịrị otu awa.
Ọnụ ọ na-enye arụmọrụ dị mma na nhazi ọdịnaya, egwuregwu vidiyo na n'ezie ọrụ ndị ọzọ kwa ụbọchị. Ọsọ nke ncheta ya yana njirimara ọrụaka ya na-enye anyị ahụmịhe dị elu. Anyị na-eburu n'uche na anyị nwere mgbawa 5G Ọ bụ ezie na anyị enwebeghị ike ịchọpụta nsonaazụ nke ọrụ ya ebe ọ na-enweghị ụdị njikọta a oge niile, yabụ ịhụ akara ngosi "5G" na-apụta site n'oge ruo n'oge na ụlọ elu ahụ ezughi iji nye gị ikpe nke uru na ya ịrụ ọrụ, ọ bụghị otú ahụ na WiFi 6, nke ahụ na-enye arụmọrụ dị elu, dịka ị ga-atụ anya ya.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ncheta ụfọdụ na anyị nọ otu nzọ ụkwụ n'okpuru ọkwa kachasị elu, Dịka ọmụmaatụ, ọ na - eme na ụda olu, nke na - anaghị enye anyị ahụmịhe nke bara ọgaranya, yana igwefoto, ozugbo ị chọrọ ọnọdụ ndị na - adịghị mma, ha na - amalite inwe nsogbu ịnye nsonaazụ egwuregwu. N'agbanyeghị nke a, ọ na-enye anyị ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu nke ịtụle ụdị ihe mmetụta ya na ngwa igwefoto a maara nke ọma na Xiaomi, nke na-eme ka ahụmahụ zuru oke na usoro ndị a dịkwuo ukwuu.
Maka akụkụ ya, IPS LCD panel Ọ hapụkwara m a bittersweet mmetụta, àjà a obi ọjọọ akpaka tuondu ume ọnụego, otu ihe na-eme na mkpebi na ukpụhọde nke na agba, kpamkpam ịga nke ọma m si ele ihe anya. Ihe na-agbanwe mgbe anyị hụrụ onyinyo ndị ahụ mgbe niile n'akụkụ akụkụ nke ihuenyo ahụ na gburugburu freckle elu, ihe na-ekwesịghị ekwesị maka ọnụahịa ọnụahịa ya karịrị narị euro isii. Nke a nwere ike kpuchido ahụmịhe nke '' adịchaghị '', n'agbanyeghị otu ụzọ ọzọ nwere ike isi na-enyo enyo. Ahụmahụ ahụ na egwuregwu ahụ dị mma, ma ya na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị n'akụkụ ya na njirimara ihu.
Ejiri nlezianya rụọ ọnụ ma mee ka anyị nwee obi abụọ ma ọ bụrụ na anyị nọ n'ogo kachasị elu ma ọ bụ na ọ bụghị, agbanyeghị, ọ bụ obere nkọwa na-echetara gị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ihu ọdụ 1.000 euro ma ọ bụ otu euro 600. Ọ bụ eziokwu na ikekwe ọdịiche ọnụahịa anaghị akwụ ụgwọ maka nkọwa ndị a, mana nke ahụ ga-abụkwa ọdịiche dị n'etiti njedebe dị elu na etiti dị oke mma, nke n'aka nke ọzọ, ị naghị akwụsị ịkwụ ụgwọ na-atụle ọnụahịa nke Xiaomi Mi 10 T Pro, nke, agbanyeghị, ị gaghị echefu ihe ọ bụla.
M 10 T Pro
Ezigbo owuwu na nkasi obi
Ezigbo ume na ndozi ihuenyo
Nwere ihe niile na ngwaike na ike
Ihuenyo LCD na ndò na ụda mediocre
Igwefoto dị anya site na njedebe dị elu
MIUI ka nwere mgbasa ozi na bloatware
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Xiaomi Mi 10 T Pro, na-egosi mmalite nke njedebe dị elu [Analysis]
5 egwuregwu kacha mma na mbara igwe maka gam akporo
Ngwa egwuregwu egwuregwu ụmụaka kacha mma maka gam akporo